Munaasabada Lagu Xusayay Sanad Guurada 1aad Jahliyada DDSI Norway - Cakaara News
Munaasabada Lagu Xusayay Sanad Guurada 1aad Jahliyada DDSI Norway
Oslo(CN), talaado, 2, February, 2016, Munaasbad balaadhan oo lagu xusayay sanad guuradii 1aad ee ka soo wareegtay aas aaskii jahliyada DDSI ee wadanka Norway ayaa ka dhacday magaalada Oslo ee caasimada Norway.
Munaasabadaasi ayaa waxaa soo diyaariyay hogaaminta jahliyada DDSI ee wadanka Norwayn waxaa ka soo qaybgalay masuuliyiinta jahliyada, waxgaradka jahliyada, kooxo fanaaniin ah iyo qaybaha kala duwan ee jahliyada DDSI ee wadanka Norway.
Munaasabadan ayaa waxay ahayd mid loogu dabaal dagayo sanad guurada 1aad ee ka soo wareegtay aas aaskii jahliyada DDSI ee Norway, in la taageero guulaha horumarineed ee ay xukuumada DDSI sanadihii ugu danbeeyay ka soo hoysay dhinacyada horumarka iyo nabadgalyada iyo waliba in munaasabadaasi lagu xoojiyo ka mid noqoshada xubinimada ururka horumarinta somalida itoobiya ee jahliyada DDSI ee dalka Norway.
Waxaana munaasabadaasi ugu horaynii ka hadlay gudoomiyaha jahliyada wadanka DDSI ee wadanka Norway mudane Xiis Maxamed Biixi, wuxuuna ka warbixiyay hawlihii waxqabadka ee tan iyo intii la aas aasay jahliydan wadanka Norway u qabsoomay iyo jihooyinka horumarineed ee ay jahliyada hiigsanayo. Wuxuuna ka warbixiyay gudoomiyuhu guulaha horumarineed xasilooni ee sida xawliga ah uga hirgalay DDSI iyo xidhiidhka wanaagsan ee ay leeyihiin jahliyadan xukuumada DDSI isaga ku booriyay jahliyadan in ay sii xoojiyaan ka qayb-galka hawlaha horumarka ee DDSI gaar ahaan dhinaca maalgashiga.
Qaybaha kala duwan ee jahliyadan DDSI ee wadanka Norway oo ay ka mid yihiin Waxgarad,odayaal iyo haweenkii ka hadlay munaasabadaasi ayaa si qoto dheer uga hadlay ahmiyada ay leedahay munaasabadani, waxayna sheegeen in ay siwayn u taageersan yihiin dadaalada balaadhan ee ay xukuumada DDSI ka wado deegaanka gaar ahaan socdaalada ay hogaaminta xukuumada DDSI ee uu hogaaminayay madaxwayne Cabdi Maxamuud Cumar ku soo mareen gobolada deegaanka sida socdaalkii horumarinta cagaaran.
Munaasabadan oo ay kooxda fanka iyo suugaanka ee jahliyada DDSI ee Norway ku soo bandhigayeen hoose iyo dhaantooyin ka turjimaya horumarka ka jira deegaanka ayaa ku soo dhamaantay jawi aad u wanaagsan iyada oo lagu kala qaatay qorshayaal dhaxal gal ah gaar ahaan is diwaan galinta iyo ka mid noqoshada ururka horumarinta somalida itoobiya taasi oo loo xilsaaray gudi ka shaqaysa diwaangalinta jahliyada ee ka mid noqoshada xibinimada ururka horumarinta somalida itoobiya.